RWBY Fandomka Sunta ah, iyo Muranka Ismiidaaminta ah - Kale
RWBY's Fandom Sunta ah, iyo Muranka Ismiidaaminta ah (Aan Waxyaabaha Qaar Ka Sifeyno)
Shirkadda Mecha waxay ku saleysan tahay Boqortooyada Midowday (UK), sidaa darteed waa abbaare 9:50 AM sidaan qoraalkan u qorayo.
Marka dadku dhahaan RWBY’s anime fandom waa sun mana been sheegaan. RUNTA runti waa fanbase sun ah.
Waxay umuuqataa xalay Riwaayad aad u fara badan ayaa faaftay kadib markii ay daabaceen warar ku saabsan ismoodsiinta loo malaynayo inanta ee la xiriirta fanbase-ka RWBY.
Sidee wax walba ku bilaabmeen
Warkan ayaa laga soo qaatay Geesi Hey’s Kanaalka YouTube, halkaas oo uu kaga hadlay isla wax.
Waxaa jira war maanta ku saabsan gabadh dhalinyaro ah, Cleo, oo la sheegay inay nolosheeda ka qaaday dhibaatayn ka timid #RWBY bulshada. Halkan waxaa ku yaal baloogyada ka hadlaya waxa dhacay haddii aad jeclaan lahayd inaad akhrido oo aad samaysato fikradahaaga. https://t.co/oKvNbQ5EbC
Mahadsanid @SparrowsAlbion wadaagista tan
- HeroHei (@_Hero_Hei_) Nofeembar 6, 2019
Macluumaad badan oo lagu soo aruuriyay qoraalkii shalay ayaa sidoo kale laga soo qaatay koontada gabdhihii loo maleynayay 'Tumblr', barteeda Twitter-ka, iyo farabadan tweets kale oo isla wax ka hadlaya
tw: is-dilid, xiriirrada farqiga da'da.
haye @RoosterTeeth , Fandom-kaaga rwby wuxuu u xuubsiibtay isdilida dhabta ah ee gabadha hada markab 'aan munaasib ahayn', fadlan miyaanu ka heli karnaa xoogaa talo ah idinka niman yahow? gobolka fndm-ka aad buu u fogaaday. https://t.co/iL3ggXD981
- adam stannie (@owletarc) Nofeembar 6, 2019
Sida aad ka arki karto sawirka kore ee gabadha bilaabay murankan, waxay tirtirtay xisaabteeda.
Mashiin sidaada oo kale ah cabsi ma la kulantaa
Ismiidaaminta RWBY Dhammaantood waxay ahayd HOAX U DIGNIIN
Waxay shaqaysay xp
Waxay ka sameeyeen maqaal dhan oo ku saabsan, taas oo u baahan in la cusbooneysiiyo ama laga baxo hadda https://t.co/c7qeU5nHHz
ZDayaanna @ (@ MemeZilla07) Nofeembar 7, 2019
Qof ayaa u baahan inuu helo dadkaas oo u sheego inay been abuur tahay https://t.co/9sxB6BX9i6
- TheLastSuperSaiyan & # x1f41d; & # x1f41d; & # x1f5a4; & # x1f49b; BILAAHI MADOW (@ cabdiraxmanmax1) Nofeembar 7, 2019
TONS of tweets ayaa daadad ku soo rogay wax walba oo been abuur ah. Ama si kale haddii loo dhigo - sida RBBY’s fanbase ay sun u tahay.
Aad ayey sun ugu yihiin xaqiiqda ah inay iyagu raalli ka yihiin inay tan sii fogaadaan oo kaliya inay ka hortagaan dadka kale ee bulshada ka tirsan.
Xitaa emayllada ku saabsan khiyaanada ismiidaaminta RWBY waxay bilaabeen inay soo socdaan
Sida ay leedahay:
“Salaan kadib waxaan jeclaan lahaa inaan dhaho taas waa la xaqiijiyay been abuur. Waxaa jira qoraallo dhowr ah oo caddeyn ah oo Cleo xitaa ma jiro.
Maaddaama qof dhab ahaantii lumiyay saaxiibbadiis ugu dhow inuu is dilo oo aan badbaado naftayda tani waxay iga xanaajisay inaan arko waa been abuur. Haa xoogsheegashadu waa arin iyo sababaha ugu weyn ee waxyaalahan oo kale laakiin qofkan ayaa soo saaray ans Sawir ayaa ka dukaameystay qoraalkii asalka ahaa ee aan arkay.
Isla qofka wax ku qoraya magaca qofkan wuxuu leeyahay 4 koonto oo kala duwan ama ka badan. Waxaa jira 2 qoraal faahfaahsan oo ku saabsan natiijooyinka caddaynta ah. Waxaan kaliya rabay inaan banaanka soo dhigo in tani ay tahay been abuur. “
Sababta aan warkaan ugu duubay markii hore
waa WELL oo la diiwaangeliyey sida RWBY’S anime fandom u yahay sun ah aaminaad ka baxsan.
Dad badan ayaa ku soo baxay Twitter iyaga oo ka hadlaya. Xitaa dadka ku jira warshadaha lafteeda.
Shalay oo ahayd Noofambar 6th, 3 qaybood oo war ah ayaa la daabacay:
22 Heesaha Caanka ah ee Anime Theme Dayrta 2019 (Waxaa qiimeeyay Japan)
Animation-ka 'Kyoto' wuxuu wadaagayaa Farriinta Qalbi Jabka si loo Maamuuso Dhibbanayaasha (Dhacdada Xusuusta)
Gabar isdilay kadib markii loo cagajugleeyay RWBY Fanbase (Murugo News)
Waxay ahayd maalin 'caadi ah'. Aniguna anshax ahaan waxaan mooday inay ahayd sax wax la sameeyo si loo wadaago wararka ku saabsan waxa loogu yeero “ismiidaaminta”.
Laakiin sida iska cad taasi waxay ahayd qalad weyn
Gabadha bilawday waxan oo dhan way kayartahay sh * t. Gaar ahaan markaan ogahay shaqsiyan sida ay u daran tahay ismiidaamintu iyo sida ay u saamaynayso qofkasta oo ku xidhan dhibanaha.
Si daacadnimo ah uma hadli karo sida aaladaha sida Twitter loo isticmaalo doqonimada sh * t sidan oo kale, dhammaantoodna waxaa loogu talagalay istaroogga ego.
RWBY'S fanbase sun ayaa loogu talagalay run.
Ku soo duub tan adoo ka hadlaya tweet this RIDICULOUS:
Yo @_Hero_Hei. Shimbir yar ayaa igu tiri waxaa lagugu siiyay lacag dhiig ah https://t.co/4k1wkHugMz si aad u abuurto been abuur ah oo ku saabsan isdilid been abuur ah oo loogu talagalay gabar been abuur ah oo magaceeda la yiraahdo Cleo si aad uga dhigto kuwa wax rarta inay u muuqdaan kuwo xun oo aad u hesho aragtiyo badan kanaalkaaga. Feejignow inaad ka jawaabto knockoff Dramaalert?
Dayaanna ( Nofeembar 7, 2019
Marka hore aan idhaahdo - Xitaa ma aqaano Hero Hei shaqsiyan.
OO wax xiriir ah lama lahan Mecha Company waxkastoo ay yihiin.
Waan ka warqabaa cidda uu yahay iyo waxa uu sameeyo, laakiin fikradda ah 'waxaa lagugu siiyay lacag dhiig si aad u abuurto been abuur' waa gabi ahaanba * t.
Qofkasta oo raaca Shirkadda Mecha ama aniga shaqsiyan waan ognahay in tani AAN ahayn nooca waligaa aad arki doontid.
War kasta oo war ah waxaa loo soo qaadaa si dabiici ah, mana jirto cid mushahar siineysa inay ku daabacdo wararka boggan.
In kasta oo aanan u arkin Hero Hei oo fiidiyoowga noocaas ah samaynaya si 'dhoofiyayaashu u muuqdaan kuwo xun' sidoo kale (anigu ma rajeynayo).
Si kasta way
Taasi ma dhici doonto halkaan weligeedna ma dhicin.
Intaas markaan idhi - tani waa cashar laga bartay
Waad ku mahadsan tahay qof walba oo gacanta soo taagay oo ka hadlay.
Boqortooyada Midowday (UK) waa ay huruday waqtigaas, laakiin uguyaraan hada waa lahadlay oo sariirta ayaa la dhigay
Animation-ka Kyoto wuxuu adeegsan doonaa $ 10.1 Million oo dollar oo tabarucaad ah si loogu caawiyo dadkii waxyeeladu ka soo gaadhay Weerarkii Gubay